लाइभ घटनाहरूको बारेमा सभाहरू जस्तै सभाहरू , फोरमहरू र भाषणहरू नयाँ नौसिन्दा संवाददाताहरूको लागि चाखलाग्दो हुन सक्छ। त्यस्ता घटनाहरू अक्सर असंगत हुन्छन् र यहाँ सम्म कि कुनै पनि अराजकता हुन्छ, त्यसैले यो संवाददाताको कथा र अर्डर दिनको लागि हो। यहाँ त्यसका लागि सुझावहरू छन्।
1. तपाईंको लेबर पत्ता लगाउनुहोस्
एक प्रत्यक्ष घटना कथा को नेतृत्व को सबै भन्दा सुसमाचार र / या रोचक कुरा मा ध्यान दिनु पर्छ कि घटना मा हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो स्पष्ट छ - यदि कांग्रेसले आयकरहरू उठाउनको लागि मतदान गर्दछ, संभावनाहरू तपाईंको नेतृत्वमा छन्।
तर यदि यो तपाईं स्पष्ट छैन भने के महत्त्वपूर्ण छ, घटनाको बारेमा जानकारी साक्षात्कार व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के देख्नको लागि हेर्न को लागी।
2. केहि बोल्दैन कि लेडिजबाट बचाउनुहोस्
लेडी जो केहि पनि भन्न को लागी केहि केहि गर्दैन:
ए) "सेन्टरभिले नगर परिषदको बैठकमा बजेटको बजेटको बैठकमा बजेट।"
बी) "डिनोसोर मा एक भ्रमण विशेषज्ञ ले गत रात केन्द्रियविले कलेज मा एक कुरा दिए।"
यी कुनै नेतृत्वले हामीलाई यस तथ्यभन्दा बाहिर बताउँछ कि शहर परिषद र डायनासोर विशेषज्ञले केहि कुरा गरे। यो मेरो अर्को टिपमा जान्छ।
3. तपाईंको लेबर विशिष्ट र जानकारी गराउनुहोस्
तपाईंको नेतृत्वले पाठकहरूले विशेष जानकारी के भयो वा घटनामा भनिएको थियो। यसैले भन्ड-कुनै पनि नेतृत्वको कारण मैले माथि लेखे, विशिष्ट पाउनुहोस्:
ए) "सेन्टेरिलिल्ला सिटी काउन्सिलका सदस्यहरूले गत रातमा तर्क गरे कि बजेट स्लैश वा आगामी आगामी वर्षको लागि कर बढाउने हो भने।"
बी) "एक विशाल उल्काइट 65 मिलियन वर्ष पहिले डायनासोर विलुप्त हुन को लागि जिम्मेदार थियो, एक विशेषज्ञ ले कल रात भन्यो।"
4. घटनाक्रमको बारेमा क्रान्तिको बारेमा लेख नगर्नुहोस्
यो क्लासिक गल्ती हो कि नौसिखिया संवाददाताहरु द्वारा बनाईएको छ। तिनीहरू एक कार्यक्रमको आवरण गर्छन्, एक स्कूल बोर्ड बैठक भन्छन्, र क्रोनलजील अर्डरमा यसको बारेमा लेख्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंले केहि चीजहरू पढ्नुभएका कथाहरूसँग समाप्त हुनुहोस्:
"सान्सेर्विल स्कूल बोर्डले रातीको बैठकमा आयोजना गर्यो।
पहिलो, बोर्ड सदस्यहरूले विश्वासको प्रतिज्ञा गरे। त्यसपछि तिनीहरूले उपस्थित गरे। बोर्ड सदस्य जेनिस हान्सन अनुपस्थित थियो। त्यसपछि उनीहरूले कसरी मौसममा हालै ठुलो ठाउमा छलफल गरे, र .... "
समस्या हेर्नुहोस्? कुनै पनि कि सबै चीजहरूको बारे मा परवाह छैन, र यदि तपाईं कथा लेख्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद मा घुमाउनुहुनेछ। यसको सट्टा, तपाईंको कथाको शीर्षमा सबैभन्दा रोचक र समाचार वाणी सामान राख्नुहोस्, र कम रोचक चीजहरू कम हुँदैछ - कुनै पनि कुराले गर्दा यो कस्तो हुन्छ। कुन टिप छैन। 5।
5. साँच्चै बोरिंग सामाग्री छोड्नुहोस्
सम्झनुहोस्, तपाईं एक रिपोर्टर होईन, स्टीनोग्राफर होइन। तपाईं कुनै दायित्वको अधीनमा रहनु भएको छ तपाईंको कहानीमा समावेश हुने सम्पूर्ण कुरा जुन तपाईंले कवर गरिरहनुभएको घटनामा हुन्छ। त्यसोभए त्यहाँ केही बोरिंग छ भने तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि तपाइँका पाठकहरूको ध्यान पर्दैन - जस्तै स्कूल बोर्ड सदस्यहरूले मौसममा छलफल गर्ने - यसलाई छोड्नुहोस्।
6. प्रत्यक्ष उद्धरणहरूको धेरै समावेश गर्नुहोस्
यो नयाँ संवाददाताहरू द्वारा अर्को गल्ती छ। तिनीहरू सभाहरू वा भाषणहरू लुकाउँछन् - मूलतः मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेका छन् - तर त्यसो भएमा उनीहरूको सीधा उद्धरण भने केहीसँग कथाहरूमा परिणत गर्दछ। यसले केवल सादा बोरिंगका कथाहरूको लागि बनाउँछ। सँधै बोल्ने मानिसहरूका धेरै राम्रो, सीधा उद्धरणहरू संग घटना घटनाहरूलाई सधैं छोड्नुभयो।
युवाहरू किन समाचार पढ्न सक्दैनन्?
सफ्ट कोर्टलहरूको लागि एक गाइड (अक्टोकर्स)
प्रभावशाली लेखन को मूल विशेषताहरु
ब्यान्ड स्यान फ्रान्सिस्को
तेस्रो हप्ताको आगमनको लागि आगमन भेडा प्रार्थना
जुडी गारल्याण्डको जीवनी
पवनको ग्यासहरूको कारणहरू सिक्नुहोस्
मेपल क्यानन मा स्पोर्ट क्लिनिंग एडवेंचर्स
बेंजामिन हैरिसन फास्ट तथ्य
कसरी अपराधको दृश्य कीराहरू एक लाशको मृत्युको समय प्रकट गर्छन्
व्यापार पत्र लेखन: दावी समायोजन पत्रहरू
विगतको समयमा प्रत्यक्ष वस्तु प्रर्दशन कसरी प्रयोग गर्ने
स्वादिष्ट सामान्यता (भ्रम)
यहूदावाद मा शफोर साधन को मूल
लाओस | तथ्य र इतिहास
टेलर विश्वविद्यालय प्रवेश
कसरी कन्जुगेट 'रजर' (शेवमा)
तपाईंको हलिउड गीत सूचीमा खराब धर्म र अन्य रकर्सहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्
तपाईंले सिक्न मद्दत गर्न अंग्रेजी कक्षामा प्रश्न सोध्नुहोस्
रोब लोई रोस्ट मा 20 बेस्ट एन क्यूटर चुटकुले
महान् आयोग के हो?
एक एकल सील मा यथ्जी मा एक सानो सीधा सीधा को संभावना
सबैभन्दा ठूलो प्रयासको सिद्धान्त: परिभाषा र जिपको व्यवस्थाको उदाहरण
1974 ब्रिटिस लेल्यान्ड मिनी पिकअप ट्रक बारे